I-samsung galaxy s7 kunye ne-galaxy s7 imilinganiselo yobungakanani obutyholwayo obutyhilwe sisikimu esivuzayo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ubungakanani bomphetho we-Samsung Galaxy S7 kunye ne-Galaxy S7 ekutyholwa ukuba ibonakaliswe sisikimu esivuzayo
Ubungakanani bomphetho we-Samsung Galaxy S7 kunye ne-Galaxy S7 ekutyholwa ukuba ibonakaliswe sisikimu esivuzayo
Kwangoko namhlanje, ingxelo evela eMzantsi Korea ibanga ukuba kuya kubakho ubulungisa Iinguqulelo ezimbini ze-Samsung Galaxy S7 Inguqulelo esemgangathweni ye-5.2-intshi kunye nohlobo olugobileyo lwe-5.5-intshi eyahlukileyo. Emva kweeyure nje, iskim esityholwayo sityikitywe sayifumana indlela yaso kwi-intanethi esithi ibonise ubungakanani bezo nguqulelo zombini zefowuni.
Ngaphambi kokuba singene kwiinkcukacha, nceda ukhumbule ukuba ukuchaneka kwesi sikimu akunakuqinisekiswa. Kananjalo, qiniseka ukuba uyetyisa le info kunye nedosi enkulu ngokungaqhelekanga yengqolowa yetyuwa.
Ngokwesikimu esivuzayo, i-Samsung Galaxy S7 iya kuba nobubanzi nokuphakama okufanayo (70.5 x 143mm) njenge-Galaxy S6 yangoku. Oku kunika umdla kuba i-Galaxy S7 kuthiwa inomboniso we-5.2-intshi, inyuka ukusuka kwi-intshi ye-5.1 kwi-Galaxy S6. Kule milinganiselo, kwaye kuthathelwa ingqalelo umboniso we-5.2-intshi osebenza kumgangatho we-16: umlinganiso we-9, i-Galaxy S7 iya kuba nomlinganiso wesikrini nomzimba we-73.94%. Ukubhalwa kwakhona, i-Galaxy S6 ine-screen-to-body ratio se-70.7%.
Ukufudukela kumda we-5.5-intshi ye-Samsung Galaxy S7, amabango avunyiweyo ukuba ifowuni iya kulinganisa i-151mm ukuphakama kunye ne-73mm ukuphakama. Ukuxhotyiswa nge-5.5-intshi ye-16: isikrini se-9, umda we-Galaxy S7 uya kuba nomlinganiso we-screen-to-body we-76.62, efanayo naleyo yomda we-Galaxy S6 + kunye ne-Galaxy Note 5.
Enye inkcukacha eziza kutyhilwa ngala mabango kukuba i-Galaxy S7 iza kuza nomqolo obuyelweyo ukuzama ukuphucula i-ergomomics. Umda weGPS S7, kwelinye icala, uboniswe ngomqolo ongasemva, nto leyo evakalayo inikwe umboniso ogoso ngaphambili.
Ukuba ufuna ukufumana amahemuhemu e-Galaxy S7, ke konke okufuneka ukwenze kukufunda iinkcukacha zethu Uphengululo lwamahemuhemu e-Samsung Galaxy S7 Kwaye uya kukhawuleza ngokukhawuleza.
umthombo: Igunya le-Android
Ngaba ipad ilungile
I-Verizon ngokuyimfuneko ithatha iphepha kwi-T-Mobile kunye neapos; incwadi yakudala yokudlala ngentengiso entsha ye-5G
Ubungqongqo kunye nokuPhambili - Yintoni umahluko?
Uyithumela njani imifanekiso ephezulu kwi-Facebook Messenger
Kufuneka wenze ntoni xa ifowuni yakho imanzi
Elona cwecwe libalaseleyo leCyber ​​Monday
Iklabhu yamaSam & apos; ilungiselela uLwesihlanu omnyama ngomnyhadala wosuku olunye wokuthengisa, nazi zonke izivumelwano
Ukhutshiwe! I-Galaxy S8 kunye ne-S8 + ividiyo ebonisa ukuba usizi luza ngokwamanqanaba, nantsi kutheni
Izivumelwano ezitsha ezishushu zilahla i-Samsung kunye neapos s Galaxy Note 10 kunye neNqaku 10+ kumhlaba weengxoxo